Lixabiso Foring iindawo mveliso kunye nabathengisi | Ouzhan
Foring iindawo steel stainless
"I-punch ebomvu" ngokwenene yinkqubo yokutshisa i-extrusion. Ukubetha ngenqindi ebomvu kwesinyithi kufuneka kwenziwe ukusebenzisa i-carbide yentsimbi. Ubulukhuni be-carbide yesamente ebunjiweyo isezantsi kunaleyo ye-carbide yesamente, kwaye ukuqina kwempembelelo yayo kubhetele kunaleyo ye-carbide yesamente. Ngapha koko, i-carbide yesamente ebunjiweyo yentsimbi inokulungiswa kuqala ize icinywe.
Punch ebomvu steel stainless nasekuqiniseni-steel stainless iindawo nasekuqiniseni iindawo
I-carbide yesamente ebunjiweyo yentsimbi ayinawo nje amandla aphezulu, ukomelela, kodwa inokuqwalaselwa ngokusebenza okuchaseneyo kunye nokusebenza kwe-thermal, kwaye inobunzima obuphezulu be-carbide yesamente (emva kokucima kunye nokushisa, inokufikelela (68 ～ 73) HRC, ephezulu Ukuxhathisa ukunxiba ke ngoko, kulunge kakhulu ekuveliseni izinto ezahlukeneyo zokubumba.Nangona kunjalo, kuba i-carbide yesamente kunye ne-carbide yesamente ebunjiweyo ziyabiza kwaye zinobunzima obubi, kufanelekile ukusebenzisa ii-insert ukuvela ekubunjeni ukwandisa ubomi benkonzo yokubumba kwaye ugcine izinto kunye nokuncitshiswa kweendleko.Ngenxa yeempawu zentsimbi engenasici, abathengi abaninzi banesiqhelo besebenzisa intsimbi engenasici ukwenza iinxalenye, kwaye izibonelelo zicacile.
Izinto eziluncedo ze Ouzhan steel stainless ezibomvu isitampu iindawo nokomisa
-Iipropathi zeKhemikhali: Ukuxhathisa kweKhemikhali kunye nokumelana ne-electrochemical corrosion zezona zinto zibalaseleyo kwizinyithi, okwesibini zii-alloys ze-titanium.
-Iipropathi zoomatshini: Ngokweentlobo ezahlukeneyo zentsimbi engenasici, iipropathi zoomatshini zahlukile. Isinyithi seMartensitic sinamandla amakhulu kunye nobulukhuni, kwaye kufanelekile ukuvelisa izinto ezinokumelana nomhlwa ezifuna amandla aphezulu kunye nokumelana nokunxiba okuphezulu, okufana ne-hydraulic shafts shafts kunye ne-stainless steel. Iimela, iibheringi zentsimbi engenanto, njl., I-austenitic insimbi engenasici ineplastikhi elungileyo, hayi amandla aphezulu kodwa eyona nto inokumelana kakuhle nomhlwa phakathi kweentsimbi ezingenazintsimbi. Kufanelekile kwizihlandlo ezifuna ukumelana nokubola kodwa iipropathi zoomatshini eziphantsi, ezinje ngezityalo zamachiza kunye nezityalo zesichumiso. Izixhobo zezixhobo ze-sulfuric acid, i-hydrochloric acid abavelisi, njl., Ewe, zinokusetyenziswa nakwimizi-mveliso yasemkhosini efana neenkwili. Insimbi engenasici ye-Ferritic ineempawu ezilinganiselweyo zomatshini kunye namandla asezantsi, kodwa iyamelana ne-oxidation kwaye ilungele iindawo ezahlukeneyo zomlilo.
-Ukusebenza kwenkqubo: I-Austenitic insimbi engenasici inenkqubo efanelekileyo yokusebenza. Ngenxa yeplastikhi yayo elungileyo, inokuqhubekeka kwiipleyiti ezahlukeneyo, iityhubhu kunye nezinye iiprofayili, ezifanelekileyo ekuqhubekeni koxinzelelo. Isinyithi seMartensitic sinenkqubo yokusebenza kakubi ngenxa yobunzima obuphezulu.
-Ubume bokubumba obomvu ngokusisiseko abuphelelanga kwimilo yangaphandle yenxalenye yemveliso ngokwayo.
Inkonzo yentsimbi engenasici eyenziwe ngokwezifiso ze-China zokwenza iinxalenye zomakhi zentsimbi engenasici
I-Ouzhan ngumzi mveliso wokudibanisa urhwebo kunye norhwebo, ukubonelela ngenkonzo enye yokujika kunye neenkonzo zokugaya umatshini. Ngokweemfuno zabathengi, inokuqhubekisa ngentsimbi engenasici ngeendawo ezizinzileyo nezithembekileyo zokuchaneka. La malungu omatshini enziwa kusetyenziswa eyona mveliso ikumgangatho ophezulu, efunyanwa kubathengisi abaziwayo beemarike. Iqela lethu lobuchwephesha elinamandla kunye nobuchule kunye nolawulo olusebenzayo kunye nenkqubo yokusebenza kunokuqinisekisa ukwenziwa ngokugqibeleleyo kweentsimbi zentsimbi zokwenza izinto. Ukongeza, iinxalenye zokwenza izinto ezenziwe ngentsimbi engenasici zihambelana ngqo nemigangatho yemigangatho kwaye zinokusetyenziswa kwizicelo ezahlukeneyo zeshishini. Kwaye sinokubonelela ngensimbi yokhuphiswano lwentsimbi ye-CNC yokuQinisa iinkonzo zexabiso kubathengi bethu abaxabisekileyo.
Ukusetyenziswa kweentsimbi ezibomvu zenziwe izitampu zokwenza izinto
Amalungu intsimbi engatyiwa efuna ukuveliswa ubunzima, ebomvu bomlilo ekwenziweni isetyenziselwa imveliso ubunzima, ukonga umjikelo imveliso kunye neendleko.
Zeziphi izinto ezenziwe ngentsimbi engenasiphelo nasekuqiniseni iinxalenye
Ukufakwa kweentsimbi ezingama-304 kusetyenziswa ngokubanzi kwizixhobo zokwakha kunye nakwizixhobo zemihla ngemihla, kodwa kumashishini amdaka kakhulu okanye kumoya waselwandle, kungcono ukusebenzisa i-316 yesinyithi.
Amalungu amancinci aneemfuno eziphezulu, ukubetha okubomvu kunokusetyenziselwa ukuvelisa izinto ezininzi, ezifanelekileyo izixhobo zoomatshini kunye neemfuno zemihla ngemihla ezinamacandelo amancinci.
Izinto eziluncedo insimbi nasekuqiniseni iindawo iindawo
-Zonke izinto ezenziwa ngokuchanekileyo zenziwe ngentsimbi engenasici ziphantsi kovavanyo olungqongqo lomgangatho.
-Ngokuya kwimizobo okanye iisampulu zokwenza ngokuchanekileyo izixhobo zentsimbi zokwenza izinto.
Egqithileyo Elungiselelweyo carbon intsimbi zakha iinxalenye
Okulandelayo: Elungiselelweyo steel stainless zakha iinxalenye ngoomatshini
Nasekuqiniseni iindawo carbon intsimbi